Wasaaradda waxbarashada Faderaalka oo gaadiid ku wareejisay wasaaradaha waxbarashada maamul gobaleedyada dalka - Bandhiga Media
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Hiddaha & Tacliinta Sare ee XFS, mudane Cabdullahi Goodax Barre ayaa maanta ku wareejiyay 11 baabuur Wasaaraddaha Waxbarashada Dowlada dalka, baabuur oo loogu tagalay kormeerada dugsiyada iyo ka qeyb qadashada baahiyaha ay qabaan wasaaradaha Waxbarshada Maamul Gobaleedyada dalka.
Munaasabada lagu wareejinayay ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada Hiddaha & Tacliinta Sare ee XFS,
Munaasabadda ayaa waxaa Goob joog ka ahaa Safiirka mudowga yurub ee soomaaliya, wasiirada Waxbarashada Maamul Gobaleedyada dalka.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku wareejiyay baabuurta wasiiradda maamul gobaleedyada dalka waxa uuna u mahad celinayaa barnaamijka iskaashiga caalimiga ah ee waxbarashada oo qeyb muhiim ah ka qaata horumarinta waxbarashada.
,,Waxaan maanta ku wareejinay Wasaaradaha Waxbarashada Dowlad Goboleedyada Dalka 11 baabuur oo laga iibiyay mashruuca “Iskaashiga Caalamiga ah ee Waxbarashada” (Global Partnership for Education).
Baabuurtaan waxaa loogu tala galay in baahiyaha Wasaaradaha Waxbarashada Dowlad Goboleedyada lagu daboolo sida kormeerka iyo howlaha kale ee qeybta ka ah horumarinta waxbarashada dalka.
Waxaan u mahadcelinayaa mashruuca “Iskaashiga Caalamiga ah ee Waxbarashada” (Global Partnership for Education) oo kaalin muhiim ah ka qaata horumarinta waxbarashada dalka
Gaadiidkaan maanta ay wareejisay wasaaradda waxbarashada Somalia ayaa la filayaa in ay wax ka taraan howlaha ay hayaan wasaaradaha waxbarashada heer dowlad gobaleed oo iyagana la wareegay.